Ikhaya » Iindaba zeNkcubeko yokuHamba » Izisombululo ezisebenzayo zoKhenketho kwiPosi ye-COVID-19 Era
Izisombululo ezisebenzayo zoKhenketho kwiPosi ye-COVID-19 Era
ISouth Korea yayiyindawo enekratshi kumnyhadala ophezulu kwi-General Assembly yase-Amforth ehlelwe nguPhillipe Francois, uMongameli we-Amforht kunye no-Ambassador u-Yo-Shim DHO, uSihlalo we-SDGs Advocate Alumni.
Phakathi kweepaneli kukho
USheika Mai-Bint Mohammed Al Khalifa, uMongameli weGunya laseBahrain leNkcubeko kunye nezinto zakudala, kunye nomgqatswa wangoku kuNobhala-Jikelele we-UNWTO
UGloria Guevara, uMongameli kunye ne-CEO, iBhunga lezoKhenketho lweHlabathi kunye noKhenketho.
UMario Hardy, u-CEO, uMbutho woKhenketho wase-Pacific-Asia-IPATA
U-Elena Kontoura, Ilungu lePalamente yaseYurophu kunye nalowo wayesakuba nguMphathiswa Wezokhenketho, eGrisi.
UDaniela Otero, u-CEO weSkal International
Hon. UMphathiswa wezoKhenketho uEdmund Bartlett, eJamaica
Umphathiswa waseJamaica uBartlett ubonelele ngezi ndawo zilandelayo zokuthetha.
• Mholo emvakwemini.
• Namhlanje kunakuqala, ilizwe lisemngciphekweni weziganeko zemozulu ezibi kakhulu, iintlekele zendalo, izothuso zangaphandle, ubunqolobi, ulwaphulo-mthetho kwi-intanethi kunye nobhubhane.
Obu buthathaka bonyukile ngenxa yoqhagamshelo lwe-hyper olwenziwe ngevolumu enkulu, isantya, kunye nokufikelela kohambo. Kwaye awukho umzekelo ongcono wobu bungozi kunempembelelo ye-COVID-19.
• Ngo-Matshi walo nyaka ngeendaba zokuqhambuka kwentsholongwane e-China, bambalwa kakhulu kuthi ababenokuqikelela ukuba kwiinyanga ezisixhenxe emva koko, le ntsholongwane inoveli yayiza kutshayela umhlaba ibengoyena nobangela weengxaki kwezempilo kwilizwe lethu.
• Kweli xesha, onke amacandelo oqoqosho lwehlabathi abhengeziwe njengoko abantu behlabathi kuye kwanyanzeleka ukuba bahlengahlengise 'kwinto eqhelekileyo' yezithintelo kwindibano yoluntu, amanyathelo okwahlukana kwezentlalo, ukuvalwa kwelizwe, ukubekelwa ixesha lokuba semsebenzini imihla ngemihla, ukusebenza kwiiodolo zasekhaya, ukuvalelwa yedwa kwaye uhlale kwiodolo zasekhaya.
• Iziphumo zobhubhane kukhenketho lwehlabathi kunye nokhenketho ngokwendalo zibeyintlekele, njengoko amazwe amaninzi enyanzelekile
I-4) i-Trigger yalatha ukujongana nezenzo, ezibandakanya umbono ocwangcisiweyo kwihlabathi elifunda ukuvela ngokukhawuleza.
• Nangona le ntlekele ithe yambi, inyani kukuba akunakulindeleka ukuba ibe yeyokugqibela kobu bukhulu. Uluhlu lwezisongelo kubandakanya ukutshintsha kwemozulu kunye nefuthe lokufudumala kwehlabathi, ulwaphulo-mthetho olwenziwa ngekhompyutha kunye nobhubhane kunye nobhubhane kulindeleke ukuba ziqhubeke ukubangela imiceli mngeni ephazamisayo kukhenketho lwehlabathi kwixesha elizayo.
• Kukuba sesichengeni kolu shishino lwehlabathi kwaye imbali ikubonakalisile oku ngeziphazamiso ezinjengeSARS, ukudodobala koqoqosho lwehlabathi kunye ne-9/11.
• Njengombandela ophambili, iindawo zokufikela kwihlabathi jikelele ziya kucelwa ukuba zinike ingqwalaselo eyimbali yokwakha ukomelela. Icandelo kufuneka lilungelelane ngakumbi, lomelele kwaye likhawuleze ukusebenza.
• Lo bhubhane usinike ithuba elilodwa lokutshintshela kukhenketho oluhlaza nolungeleleneyo njengoko kucingelwa ukuba uninzi lwabakhenkethi bamanye amazwe baya kukhetha indawo "ezinzileyo" kwixesha lasemva komhlathana.
Ngobunzima kuza isidingo sokuziqhelanisa nobuchule.
• Iindawo ekungasetyenzwanga ukuzihlaziya ngokutsha ngokubhekisele kuzinzo olukhulu ziya kushiyeka zishiya ngasemva. Iimveliso ezingakumbi zokhenketho
Kuyakufuneka ukuba yakhelwe malunga nempilo, intlalo-ntle noqoqosho oluhlaza - kugxininiswa kwindlela yokuziphatha ezinzileyo nakwizenzo zabo bonke ababandakanyekayo kwityathanga lexabiso lokhenketho ukusuka kubakhenkethi ukuya kwiihotele nakwamanye amashishini ukuya kuluntu lwengingqi.
• Kufuneka sikhuthaze iimodeli zokhenketho eziqinisekisa ukuba iiasethi zendalo kunye nenkcubeko zixatyisiwe kwaye zikhuselwe, kwaye nelifa lenkcubeko elingaphathekiyo loluntu lwengingqi olukhuthaza ukuchuma kokuyila kukhuselekile.
• Ifuna iimodeli ezomeleleyo zokhenketho ezihambelana nokusingqongileyo, zikhusela impilo kwaye zixhamla kuluntu lwengingqi.
• Iikhonsepthi yokhuseleko lwendawo ekuyiwa kuyo kunye nomtsalane kwixesha lasemva kwovimba uza kugxininisa ngakumbi kwimigangatho yempilo nokhuseleko. I-laissez yemveli yokhenketho, eye yadlala kwimfuno yokunxibelelana ngaphandle kononophelo kunye namava, iyakuthi ithathe indawo yeemodeli ezintsha zokhenketho ezilinganisa iimfuno zempilo nezokhuseleko ngolonwabo nolonwabo.
Ukufezekisa le ntengiselwano, silindele ukubona iihotele ezingaphezulu, iinqanawa zokuhamba ngenqanawa, iivenkile zokutyela kunye nabaqhubi bezokhenketho bephucula imeko yabo yezempilo nococeko.
• Silindele ukubona kwakhona ukuvuselelwa kweendawo zoluntu ukuvumela ukuphambuka ngokwasemzimbeni, ukumiselwa kwezithintelo nokusinga ngakuyo
• Izicwangciso zokuhamba ngenqanawa ezinokubandakanya ukukhangelwa kobushushu kunye nokuhlolwa kwezonyango. Iindwendwe kufuneka zilindele ukubona ukucocwa rhoqo, izikhuselo eziselubala, izinto ezininzi zokucoca izandla, izikhumbuzo malunga nokuhamba kunye nohlengahlengiso lwee-lobbies ukwenza indawo eninzi.
Sele ikhona apha eJamaica, iindawo zokhenketho zikhokelwa ziiprothokholi ze-COVID-19 ezomeleleyo ezathi zaphuhliswa kumanqanaba okuqala alo bhubhane. Ezi protocols kunye nokusekwa kweepaseji ezomeleleyo ezintsha, kuvumele uxolo lwengqondo kunye nokhuseleko kubahambi nakubantu ngokufanayo.
• Isantya esikhawulezileyo sokufakwa kwedijithali ukusukela oko ubhubhane ukwanika iindawo zokufikela ithuba lokusebenzisa amandla eetekhnoloji zokwenyani zokuphuhlisa iimveliso ezintsha zokhenketho.
• Ukwenziwa kwedijithali ngokukhawuleza kunye neetekhnoloji ezivelayo, ezinje ngobunyani bokwenyani kunye nezinto ezongeziweyo, kunokudala iindlela ezintsha zamava enkcubeko, ukusasazwa kunye neemodeli zeshishini ezintsha ezinokubakho kwimakethi.
• Iimveliso ezininzi zabakhenkethi zingathengiswa kubakhenkethi bamanye amazwe ngendlela esempilweni, ekhuselekileyo nefikelelekayo kubandakanya
• Ngaphandle kokushiya indawo abakuyo, abakhenkethi baya kuba nakho ukwenza amava ngokusebenzisa izixhobo zokulinganisa, iihedsethi, ukusasaza bukhoma kunye newebhu, ukubiza nje ezimbalwa.
• Isivumelwano esinye esivelayo kukuba ukhenketho kunokwenzeka ukuba lujonge ngaphakathi kwixesha lasemva komhlathana. Oku kuthetha ukuba indawo ezingaphezulu kufuneka zihambe zonyusa isabelo sabo kubakhenkethi basekhaya. Oku akuyi kunceda kuphela ukudibanisa uluntu kunye namazwe kunye nenkcubeko yabo kodwa kuya kukhuthaza ngakumbi abantu baseholideyini apho bahlala khona.
• Esi sinokuba sisicwangciso esiliqili sokugcina amazinga aphezulu okuhlala kwiihotele ngakumbi ngamaxesha angekhoyo.
Lo bhubhani ukwasifundisile ukuba icandelo lezokhenketho kufuneka silibone lisengxakini ngalo lonke ixesha. Oku kufuna ukuba amazwe amkele indlela esebenzayo kulawulo lwentlekele ebonisa indlela yonke yoluntu.
• Ukuza kuthi ga ngoku, amazwe ayakudinga ukuthathela ingqalelo ngakumbi ukwenziwa kwemigangatho yokuvavanywa kobungozi, imephu yomngcipheko kunye namaphulo okufundisa uluntu.
• Kufuneka baphucule intsebenziswano kunye noyilo lomgaqo-nkqubo ngamagalelo amahlakani amaninzi angaphakathi nangaphandle. Kufuneka
Izixhobo kufuneka zabelwe uphando, uqeqesho, ukulinganisa kunye namanye amaphulo okwakha amandla. Ukulungela intlekele kunye nolawulo lweengozi kufuneka zilungelelaniswe kwaye zibekwe kumgangatho ofanayo kuwo onke amacandelo nakwimida yommandla nakwamanye amazwe.
• IZiko loKomeleza uKhenketho lweHlabathi kunye noLawulo lweeNtlekele, elibekwe apha eJamaica, lasekwa ngokwesiseko esiza kunceda ekulungiseleleni, kulawulo nasekuvuseleleni ukuphazamiseka kunye / okanye neengxaki ezinempembelelo kwezokhenketho kwaye zisongele uqoqosho nempilo.
• Eyona mpendulo yakutshanje kulo bhubhane wehlabathi ibe kukudalwa kweJamaica Cares, ekhusela abahambi emhlabeni kunye nenkqubo yeenkonzo zongxamiseko.
• Inkqubo iza kubonelela ngokundwendwela kwabahlobo bayo kwindawo yokuqala yokukhuselwa kwabahambi kunye nonyango olungxamisekileyo kunye neenkonzo zokuphendula ngexesha lentlekele kwimisitho ukuya kuthi ga kubandakanya iintlekele zendalo.
• Ezi ziindidi ezintsha kunye nezisombululo eziza kuthi zifuneke kwezokhenketho ukuqinisekisa ukusebenza kwayo kunye nokomelela kwesithuba se-covid-19 nangaphaya.
• Eli qonga liza kusinika ithuba lokuxoxa ngeenkcukacha ezithile, ezi kunye nezinye izisombululo eziza kuxhasa ukhenketho lwamazwe ngamazwe kwixesha lasemva komphako.